राष्ट्रपतिमा हारेपछि ट्रम्पलाई श्रीमतीले छाडिन् ! - ramechhapkhabar.com – ramechhapkhabar.com
राष्ट्रपतिमा हारेपछि ट्रम्पलाई श्रीमतीले छाडिन् !
अमेरिकी राष्‍ट्रपति पदको चुनाव हारेपछि डोनाल्ड ट्रम्पलाई लिएर अर्को द:खद समाचार आएको छ। समाचार अनुसार ट्रम्प एक अर्को ठूलो संकटमा फस्ने अवस्था आएको छ।
राजनीतिक करियरमा ठूलो झट्का भोगेको केही घण्टापछि नै उनको परिवारिक जीवन पनि संकटमा परेको खबर आएको हो।